Home » အသားပေး » #NewTekInc: အ NDI ဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးတစ်စင်းအား!
#NewTekInc: အ NDI ဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးတစ်စင်းအား!
NewTek Inc က ယနေ့ကျွန်တော်သိသည်အတိုင်းအကယ်စင်စစ် NDI ကဗီဒီယိုကမ္ဘာကြီး impact လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအလွန်မှတ်သားဖွယ်နည်းပညာများထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်! NewTek အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင် reshaped ခဲ့ကြပြီးဤနည်းပညာတိုးတက်မှုသင်သည်အနီးရှိထုတ်လုပ်မှုအိမျလာမယ့်ပါလိမ့်မည်အံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်ကြောင်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရှေ့အပြေးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ စံကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးမဆိုအပေါင်းတို့နှင့် NDI-သဟဇာတထုတ်ကုန်ကိုတိုက်ရိုက်အပြည့်အဝ 3G 1080p 60fps ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "မနယ်နိမိတ်နှင့်အတူနည်းပညာ" ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပါလိမ့်မယ်ရှိကြောင်း built-in NDI လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး NDI-PTZ ကင်မရာ။
"StudioXperience®တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Waskul.TV ကမ္ဘာတဝှမ်းဖြစ်ရပ်များမှသွားရောက်ကာကြောင်းကွင်းထုတ်လွှင့်။ NewTek'' s ကို NDI နည်းပညာ ", ကဖြစ်နိုင်သမျှအရင်းအမြစ်များနှင့်စတူဒီယို setup ကိုအချိန်အသေးအဖွဲအနေဖြင့်ငါတို့စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်ရန်အဘို့အဖန်ဆင်းတော်မူပြီ စတိဗ် Waskul, Waskul Entertainment ကမှာ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီ NewTek NDI PTZ ကင်မရာများကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ဦးအကြီးထို့အပြင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး NDI ၏ပဉ္စလက်ကတဆင့်သူတို့ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ပေါ်မှာပေါ်လာပြီးဝင်ရောက်နှင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ "
အခုတော့ထုတ်လုပ်မှုသမားတွေ, တာလီချိုးဗွီဒီယိုနဲ့အသံပေးတစ်ခုတည်း Ethernet cable ကိုရှိခြင်းအားဖြင့် Set-up ၏လွယ်ကူခြင်းရှိနိုငျသညျ, PTZ ထိန်းချုပ်မှု, တန်ခိုး။ တိုက်ရိုက်လွှစတူဒီယို, SplitmediaLabs XSplit, Streamstar: အဆိုပါ NDI-PTZ ကင်မရာကဲ့သို့သော NDI သဟဇာတစနစ်များ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်®, OBS စတူဒီယို, StudioCoast vMix, Telestream အတွက် Wirecast နှင့်, NewTek TriCaster ။ ဒါ့အပြင်ဘာ key ကို NDI-PTZ ကင်မရာကိုအလိုအလျောက်ထိုကဲ့သို့သော GoToMeeting, Skype ကို, စီးပွားရေးများအတွက် Skype ကို, မှန်ဘီလူးမီဒီယာနှင့်အခြားသူများအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်အမြင်အာရုံညီလာခံ applications များကအသိအမှတ်ပြုမည်ချိတ်ဆက်မှု၏လွယ်ကူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ဒီလိုတိပ်ဖြတ်တောက်ထံမှ nonlinear တည်းဖြတ်ဖို့အကူးအပြောင်းအဖြစ်လေးနက်တဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့, အပ်ကြောင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အနည်းငယ်တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းမှတ်ရှိခဲ့သည်။ အိုင်ပီ-based ထုတ်လုပ်မှုမှပြောင်းရွှေ့ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူများထူးခြားတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ် မိုက်ကယ် Kornet များအတွက် NDI ၏ Executive Vice President & အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ် NewTek. ဒါကြောင့်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတို့ကမောင်းနှင်လျက်ရှိသည်ကို ထောက်. "ဒီအကူးအပြောင်းမြန်ဆန်စွာဖြစ်ပျက်နေသည်။ ထုတ်လုပ်သူများကပိုပိုကောင်းရှိုးပွဲကိုဖန်တီးရန်၎င်းတို့၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးချဲ့နေချိန်မှာဒီနည်းပညာ, သူတို့ရဲ့အလုပ်ရိုးရှင်းစွာအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ NDI ကင်မရာရရှိမှုနှင့်အတူကနေ NewTek နှင့်နောက်လိုက်ဖို့သေချာကြောင်းအခြားသူများကို IP-based ထုတ်လုပ်မှုကဒီမှာအမှန်တကယ်ပါပဲ။ "
အဆိုပါ NDI-PTZ ကင်မရာကိုသြဂုတ်လ 1 တင်ပို့ပါလိမ့်မည်st ဘို့ $ 2,799 USMSRP နှင့်အမိန့်သင်ဤကိုဖတ်ပြီးအဖြစ်လက်ခံလျက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းဘူး! အဆိုပါသွားရောက်ကြည့်ရှု NewTek အွန်လိုင်းစတိုး နောက်ထပ်အသေးစိတ်သို့မဟုတ်သင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် NewTek ကိုယ်စားလှယ်။
ဘို့လိုအပ်ကြောင်း HDMI နှင့် NDI converters အဖြစ်ကနေတဆင့်အိုင်ပီဗီဒီယိုပြောင်းလဲမှ SDI သတင်းရင်းမြစ်ယခုဤနေရာတွင်ဖြစ်ပြီး, အနာဂတ်ကာလ၏စံလိမ့်မည်, သို့မှသာပြီးတော့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အဘယျသို့ထုတ်ကုန်များ၏နိဒါန်း NewTek Spark ချိတ်ဆက်ပါ။ အဆိုပါ Connect ကို Spark သက်သက်သာ Wi-Fi သို့မဟုတ် Standard Ethernet cable ကနေတစ်ဆင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဗီဒီယိုသတင်းရင်းမြစ်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်းအိတ်ဆောင်ကိရိယာဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဂိမ်း console ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ရရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်အတူဘယ်လိုကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနှင့်အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ excel နိုင်ပါတယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ! CombiTech VidBlaster, တိုက်ရိုက်လွှစတူဒီယို, OBS, Splitmedia Labs က XSplit, Streamstar: ကဲ့သို့သော NDI ကွန်ပျူတာအခြေပြုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုစနစ်များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့®, StudioCoast vMix, Telestream Gameshow, Telestream အတွက် Wirecast, NewTek TriCaster®နှင့်ပိုပြီးအများအပြား။ ထို့အပြင်ယင်း NewTek Spark ချိတ်ဆက်ပါ ဗီဒီယိုကို Google က Hangouts ကို, GoToMeeting ™, Skype ကို™, စီးပွားရေးများအတွက် Skype ကို, WebEx, မှန်ဘီလူးနှင့်အခြားသူများအပါအဝင်လူကြိုက်များ desktop ပေါ်ကဗီဒီယိုကို applications များမှကယ်တင်တတ်၏။
"ကျနော်တို့အနာဂတ်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဗီဒီယိုကသတင်းရပ်ကွက်၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်အောင်, IP ကိုကျော်ကိုအလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်လွှဲပြောင်းသောတကြောင်းယုံကြည် မိုက်ကယ် Kornet များအတွက် NDI ၏ Executive Vice President & အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ် NewTek. "NewTek Spark အလွယ်တကူပြောင်းလဲနေဖြင့်ယနေ့ကြောင့်အနာဂတ်တစ်အဖြစ်မှန်စေသည်ချိတ်ဆက်ပါ HDMI နှင့် SDI အိုင်ပီအချက်ပြမှုများသို့အချက်ပြလိုက်ခြင်း။ ဒါဟာ device ကိုသို့သင်၏ video အရင်းအမြစ် plugging နှင့် Wi-Fi connection ကိုဖွင့်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ဒီအချိန်မှာတော့ကွန်ရက်ပေါ်တွင်မဆိုလိုက်ဖက်မှုစနစ်ကြောင့်မြင်နိုင်ပါသည်။ "
အဆိုပါ NewTek connection ကို Spark NCS (HDMI ဗားရှင်း) နှင့် NCS-S က (SDI ဗားရှင်း) ဗီဒီယိုကိုကူးပြောင်းတက်မှတဆင့် loop တစ်ခုနှင့်အတူ 1080P 60fps မှထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တာလီချိုးထောက်ခံမှုပေး SD ကဒ်ဒါမှမဟုတ် USB drive ကိုမှ MP4 မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Key ကိုအင်္ဂါရပ်ယူနစ်ကို web သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ interface ကို, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ်လက်ပ်တော့ပ်ကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ NewTek connection NCS အစပျိုး မှာစျေးနှုန်း $ 499 USMSRP နှင့် NCS-S က မှာစျေးနှုန်း $ 799 USMSRP သြဂုတ်လ 1 တင်ပို့ပါလိမ့်မည်st နှင့်အမိန့်ကိုလက်ခံလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါသွားရောက်ကြည့်ရှု NewTek အွန်လိုင်းစတိုး နောက်ထပ်အသေးစိတ်သို့မဟုတ်သင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် NewTek ကိုယ်စားလှယ်။
အဘယ်သူသည်မူပိုင်-အခမဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မပါဘူး NDI SDK ကို အဆင့်မြင့် features အသစ်နှင့်သင်၏စနစ်များသည်မည်ကိုဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်, စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု, ရှေ့ဆက်အမှားဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ multicast supporting နှင့်တိုးတက်လာသော encoding က? အဖြေ: မည်သူမျှ! ဒါဟာမူပိုင်-အခမဲ့ကွန်ယက်စက်ပစ္စည်း Interface ကိုဗားရှင်း3download, Q3 2017 ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သင်ဒီမှာ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်: www.newtek.com/ndi/
"Panasonic ကသိသိသာသာရှေ့သို့နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ NDI မိတ်ဖက်တိုးဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည် NewTek ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖောက်သည်တစ်ဦးအသစ်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့််အတှေ့အကွုံမြားပေးခွငျးအားဖွငျ့။ built-in ပေါင်းစပ် NDI ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်ပေါင်းစုံ PTZ ကင်မရာများနှင့်နောက်မျိုးဆက်ခလုတ်စနစ်များ Panasonic ကယ့်လိုင်း-Up အတွက်နှင့်အတူ, ကြှနျုပျတို့သညျ ", ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်၏ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကိုဗီဒီယိုကခေါင်းဆောင်မှု furthering နေကြတယ် Delix အဲလက်စ်, ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ Panasonic ကမီဒီယာ Entertainment ကကုမ္ပဏီ PTZ ကင်မရာများကို & IP ကိုကွန်ယက်အဖွဲ့စနစ်များကဆိုသည်။ "NDI ဗားရှင်း3ချက်ချင်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦး NDI network ထဲသို့လက်ျာဘက်လဲကျနိုငျသောကင်မရာကိုဝယ်ယူနည်းပညာနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအဆင့်အထိက IP based ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလှုံ့ဆျောတဲ့ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာအဖြစ်တောက်ပအနာဂတ်ရှိပါတယ်။ "
ယင်းကနေအကျိုးကျေးဇူး NewTek NDI ဗားရှင်း3SDK ကို upgrade protocol ကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်မသာပေမယ့်လည်းအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်မည်: BirdDog, Bluefish444 Microsoft က Skype ကို, NewBlueFX, OBS, Panasonic PTZOptics, SplitmediaLabs - XSplit, အသံလွှင့် Pix, Ross ကဗီဒီယို, Telestream အတွက် Wirecast နှင့် Gameshow, vMix, NewTek နှင့်အခြားသူများအများအပြားရာပေါင်းများစွာ။ မှတ်စု: NDI ၏ version3နှစ်နှစ်အကြာနီးစပ်ရာအရပျကိုယူသောအောင်မြင်သောပစ်လွှတ်ကတည်းက NDI SDK ကိုမှအကြီးဆုံး incremental အပြောင်းအလဲဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီနေရာတွင်ပဲတချို့ဗားရှင်း 3.0 ကနေတိုးတက်မှုများနှင့်အထူးများ၏နေသောခေါင်းစဉ်:
Forward မှားယွင်းနေသည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ multicast ပံ့ပိုးမှု
တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း NDI အရင်းအမြစ်ယခုမှသာကွန်ရက်ကအခြေခံအဆောက်အဦများအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားနေရာများ, မဆိုအရေအတွက်ကအစေခံနိုင်ပါတယ်။
multicast ယခုသင့်လျော်သောအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့စစ်ဆင်ရေးရဲ့အကောင်းဆုံး mode ကို enable လုပ်ထားခြင်း, unicast ထောက်ခံမှု supplements
မြင့်မားသောစွမ်းရည် Mode ကို - NDI | HX
အပြည့်အဝ resolution ကိုအပြည့်ဘောင်-မှုနှုန်းကန့်သတ် bandwidth ကိုကြိုးမဲ့များအတွက်သင့်လျော်သောဗီဒီယို, ဝေးလံခေါင်သီနှင့်အကြီးစားကွန်ရက်များ
ပန် / စောင်း / Zoom ကင်မရာကိုထောက်ခံကြောင်း
စိတျကူးအများဆုံးအဆင်ပြေ PTZ ထိန်းချုပ်မှု configuration ကိုအတွေ့အကြုံကိုပေး, ဗီဒီယို, အသံ, တာလီချိုးနဲ့ကင်မရာကိုထိန်းချုပ် Standardizes
တိုးတက် Encoding စွမ်းဆောင်ရည်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့အားအလားတူနှုန်းထားများမှာခေတ်သစ် i7-based machine ပေါ်တွင် Encodes:
8fps, 320fps, 4fps မှာ 1000p မှာ 1080K မှာ 2500K
မည်သည့်လျှောက်လွှာသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကို SDK ကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်
"NDI ဗားရှင်း3ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုတ်လုပ်မှုအဘို့ပြုပါလိမ့်မည်လမ်းအနာဂတ်ကိုကိုယ်စားပြုယုံကြည်သောလူအပေါင်းတို့က IP ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ရူပါရုံကိုပြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ misson အမြဲအိုင်ပီကိုဗီဒီယိုနည်းပညာ၏စာအိတ်တွန်းအားပေးရန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အဓိကအသစ်သောစွမ်းရည်များနှင့်အတူဤ version ကိုမိတ်ဆက် "ဦးတည်သွားစေကြောင်းဘိလပ်မြေကူညီပေးသည်ထားပါတယ် ကပြောသည် မိုက်ကယ် Kornet များအတွက် NDI ၏ Executive Vice President & အထွေထွေမန်နေဂျာ NewTek. "ဟုအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းနီးပါးတိုင်းအဓိကရောင်းချသူအားဖြင့် NDI ၏ကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖန်တီးသူရဲ့ IP ကိုဗီဒီယို၏အဆုံးမဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အကျိုးအမြတ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါနှင့် NDI ဗားရှင်း3နှင့် multicast တူသောအဓိကနည်းပညာသစ်များ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်များ၏နိဒါန်းနှင့်အတူရှိသော အဆုံးပစ္စည်းတွေစစ်မှန်တဲ့အိုင်ပီတော်လှန်ရေးအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ "
NDI ထုတ်ကုန်သန်းပေါင်းများစွာအပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပြီးဖော်ထုတ်ရန်နှင့် IP ကျော်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့မျိုးစုံကဗီဒီယိုစနစ်များကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ NDI အစစ်အမှန်ကာလ၌ဝှက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ခံယူအရည်အသွေးမြင့်မားအများအပြားစီး, အနိမ့်အောင်းနေချိန်, ဘောင်-တိကျမှန်ကန်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံနိုင်ပါတယ်။ ဤဗီဒီယိုအားရောနှော, ဂရပ်ဖစ်စနစ်များ, ဖမ်းကတ်များနဲ့တခြားထုတ်လုပ်မှု devices များအပါအဝင်မည်သည့် network ကိုချိတ်ဆက်သောဗီဒီယိုကိရိယာအကျိုး။ ဤသည်ကြီးကျယ်လာသည်ကိုတိုက်ရိုက်ပစ္စည်းများမှပူးတွဲနေရာများတွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး SDI-based Workflows အစားထိုးရန်ကြောင်းစျေးကြီး, high-bandwidth ကွန်ရက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု switching များအတွက်ရရှိနိုင်သတင်းရင်းမြစ်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။
အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုနည်းပညာခေါင်းဆောင်အဖြစ်, NewTek ကလူကွန်ရက်စတိုင်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာဖန်တီးနှင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူမျှဝေလမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။ အားကစားဖြစ်ရပ်များ, Web-based ဆွေးနွေးချက်ပြပွဲ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေရေး, စာသင်ခန်းများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးကနေလူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေချင်နီးပါးမည်သည့်အရပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုမြန်အရင်ကထက်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြီးထွားဖို့ပါဝါပေး ။
clients ပါဝင်သည်: New York က Giants, NBA ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်, Fox News, BBC, NHL, Nickelodeon, CBS ကရေဒီယို, ESPN ရေဒီယို, Fox ကအားကစား, MTV, TWiT.TV, USA TODAY, အမိမြေလုံခြုံရေး (DHS), အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (NASA က), နှင့်အမေရိကန် Fortune မဂ္ဂဇင်း 80 ထက်ပို 100% ဦးစီးဌာန။
NewTek ပုဂ္ဂလိကပိုင်များနှင့် San Antonio တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက NewTek သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www ။newtek.com, Twitter Youtube, Flickr ကိုသို့မဟုတ် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူချိတ်ဆက်ပါ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-07-12
နောက်တစ်ခု: TMD IBC2017 မှာမိုဃ်းတိမ်သည်ဇာတိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကိုပြသ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "#NewTekInc: အ NDI ဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးတစ်စင်းအား!" ။ http://www.broadcastbeat.com/newtekinc-sparking-the-ndi-video-revolution/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။